FAQs - AfricaArXiv
Inona no atao hoe AfricaArxiv?
AfricaArxiv dia tahiry maimaimpoana malalaka ary loharanom-baovao nomerika tarihan'ny fiarahamonina ho an'ny fikarohana afrikana. Manome sehatra tsy mitady tombony ho an'ireo mpahay siansa afrikanina izahay handefa ny taratasin'izy ireo miasa, ny paosin-tsoratra, ny sora-tanana ekena (post-prints) ary ny taratasy navoakany. Vakio bebe kokoa momba ny AfricaArxiv eto: https://info.africarxiv.org/about
Iza no AfricaArxiv namboarina?
AfricaArxiv dia natao ho an'ny mpahay siansa afrikana avy amin'ny disiplin rehetra mba hizara ny valim-pikarohana nataony, anisan'izany ny fanomanana, ny lahatsoratra, ny kaody ary ny angon-drakitra.
Fa maninona isika no mila kitapom-panomanana efa vita afrikana manokana?
Mila trano fitahirizan-tena voatokana ho an'ny Afrika isika:
Ataovy hita misimisy kokoa ny fikarohana afrikana
Atsaharo ny fahalalana afrikanina
Mampifanakalo fifanakalozana ao anatin'ny kaontinanta
Ireo repository mialoha dia matetika ampiasaina matetika amin'ny tontolon'ny Open Science ary manova ny iray amin'ireo fepetra mora sy mahomby mba hahatonga ny famoahana fikarohana. Nohavaozin'ny mpahay siansa ny fandefasana, ary misy ny fizotran'ny fandinihana nataon'ny mpiara-miasa. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mbola azo atao io rehefa avy manaiky ny tahiry fiomanana.
Inona no maha samy hafa ny AfricaArxiv amin'ny repository ho avy?
Miaraka amin'ny AfricaArxiv dia te-hanome sehatra izahay mpahay siansa afrikanina mba hamoaka avy hatrany ny vokam-pikarohana azy avy hatrany ary tsy misy vidiny. Amin'izany fomba izany dia afaka mahazo valiny momba ny asany izy ireo, hanatsarana izany bebe kokoa ary hahafantatra ireo mpiara-miombon'antoka fiaraha-miasa amin'ny tetikasa ho avy. Nivoatra ny drafitra ho ampahany manan-danja amin'ny Open Science. Ny fananana tahiry voafaritra manokana ho an'ny vondrom-pikarohana afrikanina dia mety hahatonga ny fikarohana interdisiplinika manokana hamahana ireo olana afrikanina.
Manantena izahay fa hanome ny mpahay siansa afrikana bebe kokoa ny fahitana amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary handray anjara bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa fikarohana intra-Africa. Ny siansa dia ahitana foto-kevitra maro isan-karazany miaraka amin'ireo vondrona fikarohana miparitaka manerana izao tontolo izao. Ny fananganana vondrom-piarahamonin'ireo famaizana ireo ary koa voafaritra manokana amin'ny faritra sasany dia ahafahan'ny mpahay siansa sy mpikirakira vola hafa (mpanamboatra politika, mpandraharaha, mpiasa mpiasa ara-pitsaboana, tantsaha, mpanao gazety) hahita fikarohana momba ny tombotsoany amin'ny fomba mahomby kokoa.
Inona avy ireo olana atrehin'ireo mpahay siansa afrikana?
Ny fahitana ambany ambany
Famatsiam-bola fikarohana voafetra
Ny mpikaroka afrikanina dia mirona tsy dia ampidirina amin'ireo tambajotra fikarohana iraisam-pirenena
Ahoana ny fomba azon'ny mpahay siansa any Afrika?
Ny fahitana bebe kokoa amin'ny famoahana fikarohana avy amin'ny kaontinanta
Manampia statistika momba ny
valim-pikarohana voarakitry ny gazety iraisam-pirenena?
Ny valin'ny fikarohana afrikanina amin'ny ankapobeny?
Tambajotra tsara kokoa ary miara-miasa amin'ny tsirairay
Manantena izahay fa ny mpahay siansa afrikanina dia hahalala bebe kokoa momba ny vokarin'ny fikarohana hafa, indrindra fa ny fizarana ny elanelan'ny francophone sy ny fiaraha-monina siantifika anglophone ao amin'ny kaontinanta. Mampirisika ny mpanoratra izahay mba hanome famintinana fohy ao amin'ny teny frantsay na anglisy.
Ny AfricaArxiv dia hanome ny sehatra ho an'ny fikarohana stratejika ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny fiaraha-miasa any Afrika ary manerana ny kaontinanta.
Ahoana no namoronana AfricaArxiv?
Nipoitra ny hevitra ao amin'ny AfricaOSH amin'ny alàlan'ny Twitter. Sokajy Siansa misokatra dia ny fanomezana ny fotodrafitrasa ho amin'ny ezaka notarihan'ny vondrom-piarahamonina, izay mampihena ny vidiny sy ny fahasarotana ary mamela ny fifantohana amin'ny fampianarana momba ny fanomanana sy ny fampiroboroboana avy amin'ny AfricaArXiv.
Manantona ny mpahay siansa afrikana tsirairay izahay mba hanapoaka hevitra ary hamolavola ny foto-kevitry ny mpahay siansa mba handray anjara amin'ny fandraisana mpiasa (ekipa PR), ny fampiakarana, ny komity mpanolotsaina mpanentana.
Vakio eto ny famoahana ny gazety fanaovan-gazety AfricaArxiv: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service
Ahoana ny fomba fitantanana ny AfricaArxiv?
Manana ekipa hiasa sy handrindra ireo lahasa lavitra amin'ny Internet izahay. Aorian'ny fandefasana dia mpanelanelana roa na maromaro no hanara-maso ireo lahatsoratra raha marina sy misy ifandraisany.
Iza no mandoa ny vidin'ny fitantanana ny AfricaArxiv?
Tsy misy vidiny tena ilaina / ara-bola (ankoatry ny fividianana ny sehatra sy ny fotoana) - ny ezaka sy ny fiaraha-miasa rehetra dia an-tsitrapo an-dalam-pandrosoana sy fanamaroana ny siansa.
Ny fotodrafitrasa nomena OSF, izay novolavolain'ny Center for Open Science, tambajotra tsy mitady tombombarotra izay manangana fotodrafitrasa ho an'ny daholobe ho an'ny fizotran'ny asa fikarohana ary manohana ny ezaky ny ezaka maro tarihin'ny vondrom-piarahamonina mikendry ny hampitombo ny fomba fanao amin'ny Open Science.
Ahoana no fomba ampiasan'ny mpahay siansa afrikana ny AfricaArxiv?
Ny mpahay siansa afrikanina dia afaka mampakatra ireo sary vita an-tsoratra sy ireo lahatsoratra ary koa valiny ratsy, code, datasets, tesis, koa ny fahalalana nentim-paharazana izay azo ampiharina sy mifanaraka amin'ny Andininy faha-31.
Azon'izy ireo atao ihany koa ny mikaroka amin'ny alàlan'ny tahiry mba hianarana izay ataon'ny mpahay siansa hafa amin'ny kaontinanta amin'ny asa fikarohana ataon'izy ireo.
Izahay dia mandray ny fandefasana amin'ny teny anglisy, frantsay ary portogey ary koa ireo fiteny afrikanina eo an-toerana toy ny Akan, Twi, Swahili, Zulu,… ary manangana dobo fanontana izay afaka manova ireo fandefasana ireo. Matetika dia mora kokoa ny mamaritra ny asanao amin'ny fiteninao. Satria ny mpahay siansa afrikanina maro dia maro ny olona alefa any amin'ny diary jerena amin'ny teny frantsay na anglisy dia tsy ho be olana.
Ireo mpahay siansa afrikanina maniry hizara ny sora-ba nataony ao amin'ny AfricaArxiv na tahiry fiomanana efa nomanina mialoha dia tokony handinika mialoha, raha ny gazety izay kasaina havoakan'izy ireo dia mifanaraka amin'ny famoahana ny sora-baventy ao anaty kitapom-panomanana efa vita. Ny ankamaroan'ny diary akademika dia manaiky ireo boky fanomanana. Manoro hevitra izahay hanamarina ny SHERPA / Romeo serivisy ho an'ny antsipirihany na ny politikan'ny fizarana lahatsoratra.
Inona avy ny fepetra raisina amin'ny fanekena?
Drafitra politika: ny fangatahana dia tokony hahatratra ny fenitra kalitao manokana ary hanaraka ny fomba siantifika tsara sy ny fitsipiky ny siansa misokatra.
Fitsipika fanontana tokony handroso tsara mandritra ny herinandro ho avy raha mifanakalo akaiky amin'ireo siantifika afrikana hafa. Hanorina fiarahamonina matanjaka manodidina ny vondrom-piaraha-miasa izahay ary hanohy hatrany ny fizahana azy ireo ho amin'ny fanohizan-tena tsy tapaka sy manondro ny sehatra amin'ny zavatra takiana manokana ao anatin'ny tontolon'ny fikarohana afrikana.
Ahoana ny fomba ampiana tahiry fanampiny?
Amin'ny sora-tanana tsirairay dia afaka manampy fanampiny amin'ny endriny rehetra ianao miaraka amin'ny fitahirizana tsy voafetra. Kitiho fotsiny, ary kitiho ary alaivo na fidio ireo rakitra isaky ny tetik'asa tsirairay. Azonao atao koa ny mampiditra amin'ny serivisy hafa toa ny Figshare, Dropbox, na GitHub. Jereo eto ohatra https://osf.io/nuhqx/.
Ahoana no fomba havaoziko ny dikan-tsanganasa sora-tanana?
Raha hanova ny iray amin'ireo fanomanana efa nekenao, dia afaka manavao ny fidirana DOI ianao miaraka amina dikanteny vaovao amin'ny alàlan'ny kaontinao.
Azonao atao ihany koa ny manampy fotsiny ny lahatsoratra efa nandinika ny fisie nataon'ny DOI amin'ilay fandaharana ankehitriny amin'ny fanomanana.
- ny fomba fanaovana izany amin'ny OSF: help.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<
Azoko atao ve ny mamoaka ny sangan'asa amin'ny diary hafa rehefa avy nizara ny fanomanana nataoko tao amin'ny AfricaArXiv?
AfricaArXiv ary miaraka amin'ireo sehatra mpiara-miasa aminay dia sehatra fitahirizam-bokatra mialoha fidirana Open Access ka miaraka aminay ianao mizara ny asanay ho maitso Open Access (Tena archiving). Eny, azonao atao ny mandefa ny sora-tanana amin'ny diary.
Manoro hevitra izahay ny hikaroka https://www.ajol.info/index.php/ajol ary https://doaj.org/ hahitanao gazety azo itokisana hamoahana ny asanao amin'ny vidiny mirary re amin'ny fiampangana lahatsoratra (APC).
Powered by Fanontaniana FAQ HTML5
Manana fanontaniana maro kokoa ve ianao? Mandefasa mailaka izahay info@africarxiv.org